हेर बगैंचामा फेरि, बहार आयो
राजकुमार राई,८,साउन–काठमाण्डौं । रंगीन संसार अनि जीवनलाई सार्थकता र सुवासपूर्ण बनाउने साहित्य नै हो । जसले समाजका धमिलोपनलाई पर्दाफास गरी सभ्य र सुन्दर समाजको परिकल्पना गर्न सिकाउछ । यहि परिवेशमा लामो समयदेखि साहित्यको. फाँटमा निरञ्तर कलम डौड्याउनु हुने गजलकार निशा के.सी.ले लेखि पठाउनु भएकी गजलका केहि अंशहरु प्रस्तुत गरिएको छ । गजल ।।।।।।।।।।।।।।।।।। हेर बगैंचामा फेरि, बहार आयो कसरी कसरी मनमा प्यार आयो सिमलको भुवा झैँ हलुको...
ओएस नेपालद्वारा रातोपाटीकर्मी कुबेर गिरीलाई पत्रकारिता पुरस्कार २०७५’ बाट सम्मान
जनक थापा मगर, २५, असार – काठमाडौं । ओएस नेपालले रातोपाटीकर्मी कुबेर गिरीलाई पत्रकारिता पुरस्कार २०७५’ बाट सम्मान गरेको छ । दोस्रो ओएस नेपाल म्युजिक अवार्ड २०७५‘ मा उनलाई सो सम्मान प्रदान गरिएको हो । ओएस नेपालद्वारा आइतबार जमलस्थित राष्ट्रिय नाचघरमा आयोजित अवार्ड समारोहमा गायिका तथा सभासद कोमल वली, पत्रकार ऋषि धमला, ओएस नेपालका बिबेक कार्की लगायतले गिरीलाई माला, खादा, प्रमाणपत्र सहित सम्मान गरिएको थियो । रेडियो नेपालका चन्द्रमणि...
कलाखबर संवाददाता, २५,असार–काठमान्डौं । गायक तथा सङ्गीतकार अजय अलङकार कुलुङले सानीवा एल्बममा रहेको किराँती कुलुङ भाषाको गीतको म्यूजिक भिडियो शनिबार सार्बजनिक गर्नु भएको छ । स्वरस्वती नगर स्थित कुलुङ गुस्खमको सम्पर्क कार्यलयमा आयोजित सो कार्यक्रममा कवि तथा गायक कुलुङलाई शुभकामना दिने शुभेटछुकहरुको निकै घुईचो देखियो । साहित्य जगतमा समेत शसक्त रुपमा कलम चलाएका कुलुङ गायक मात्र नभएर एक स्रष्टा पनि हुन् । सानीवा एल्वम्बाट साभार कुलुङ भाषामा...
नोबेल सकोस साहित्य प्रतिष्ठान द्वारा आठ श्रस्टालाई सम्मान गर्दै
कलाखबर संवाददाता,१,असार–काठमाण्डौ । नोबेल सकोस साहित्य प्रतिष्ठान द्वारा श्रस्टा सम्मान कार्यक्रमको आयोजना हुने भएको छ। कमलादी स्थित, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा असार २ गते हुने कार्यक्रममा साहित्यिक क्षेत्रमा योगदान पु¥याउने लब्ध प्रतिष्ठित स्रस्टाहरुलाई सम्मान् गर्ने भएको छ । विशेष गरि नेपाली साहित्यमा लामो समयदेखि योगदान पु¥याउदै आउनु भएका व्यक्तित्वहरुलाई हौशला स्वरुप सम्मान गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागीएको हो । सो कार्यक्रम्मा विभिन्न विधाका आठ जना स्रष्टाहरुलाई...
सञ्चारकर्मी प्रवेश अधिकारीको पहिलो उपन्यास आधा आकाश’को विमोचन सम्पन्न
कलाखबर संवाददाता,२६,जेठ– काठमाडौं । सञ्चारकर्मी प्रवेश अधिकारीको पहिलो उपन्यास आधा आकाश’को शनिबार एक विशेष कार्यक्रमबीच लोकार्पण गरिएको छ । सोसाईटी मिडियाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि प्रा.डा. तुलसी भट्टराई, वरिष्ठ साहित्यका डा.बेञ्जु शर्मा, कवि विप्लव प्रतीक, साहित्यका वियोगी बुढाथोकी, पत्रकार नकुल अर्याल लगायतले उपन्यासको संयुक्त विमोचन गर्नुभएको थियो । चितवनमा लामो समय रेडियो प्रस्तोताको रुपमा काम गरी अध्ययनका लागि बेलायत पुगेका लेखक अधिकारीले उपन्यासमा विद्यार्थी भिसामा बेलायत पुगेका युवा...
कलाखबर संवाददाता, ३०, बैखाख– काठमाण्डौँ । शनिवार नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानद्वारा मुक्तक मेला तथा मुक्तक वाचन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । सर्वनाम थिएटर कालिकास्थानमा आयोजित कार्यक्रमा प्रमुख अतिथिको रुपमा नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रतिष्ठानका कुलपति श्री सरू भक्त रहेको थिए । प्रमुख अतिथिले दीप प्रज्वलन गरि कार्यक्रमलाई अगाडी बढाएका थिए । दीप प्रज्वलन पश्चात प्रतिष्ठानका सचिप बादल घिमिरेले स्वागत मन्तव्य दिएका थिए ।नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रामकाजीको अध्यक्षतामा कार्यक्रमलाई संचालन गरिएको थियो...
‘काव्य गुञ्जन’को दोस्रो श्रृङ्खला सम्पन्न
कलाखवर सम्वाददाता,चैत २९ – कविताका विभिन्न विधाहरू समेटेर नियमित रुपमा आयोजना हुँदै आएको कार्यक्रम ‘काव्य गुञ्जन’को दोस्रो श्रृङ्खला सम्पन्न भएको छ। दोस्रो श्रृङ्खलामा कविता, गजल र मुक्तकका पाँच–पाँच जना सर्जकहरूले आ–आफ्ना रचना वाचन गरेका छन् । भक्तपुरबाट काभ्रेको बनेपामा कविता वाचनका लागि आमन्त्रित कवि अभय श्रेष्ठले चारवटा कवितासहित आफ्नो काव्यिक धारणा राखे। यस्तै कवि कल्पना काफ्लेले आफ्ना चारवटा छन्द कविता गाइन्। अविरल ‌ओझेल र मनिष गौतमले आफ्ना ६र६ वटा...
युवाहरूमाझ सुनिए कवि प्यासी
कलाखवर सम्वाददाता,चैत २९ – ‘शाब्दिक समारम्भ’को दोस्रो श्रृङ्खलामा कवि नवीन प्यासीले युवा सर्जकहरूमाझ आफ्नो रचना वाचन गरेका छन्। हातेमालो साहित्य संगमले नियमित रूपमा गर्दै आएको कार्यक्रममा अतिथि कविको रूपमा उनले कविता वाचन गरेका हुन् । युवाकवि प्यासीले ‘मृत्युको सौन्दर्य’, ‘झुशील्कीरा’, ‘आशिर्वाद’, ‘सम्बन्ध’ लगायतका आधा दर्जनभन्दा बढी कविताहरू सुनाएका थिए। यसैबीच कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति विष्णुविभु घिमिरेले भोगाइका अनुभूतिहरुले नै सिर्जनालाई गहनता दिने कुरा बताए। घिमिरेले...